Soosaarayaasha Nidaamka ka baxsiga xaaladaha degdegga ah ee Luminescent - Shiinaha Bixiyaasha Nidaamka ka baxsiga xaaladaha deg-degga ah ee Luminescent Alaabada & Warshadaha
Qorshaha daadgureynta degdegga ah ee dab-damiska
Qorshaha daadgureynta dabka ee dabeysha ayaa sida caadiga ah lagu daabacaa filimkeena shirkadda, saxan luminescent ama saxan bir ah oo iftiin leh, oo la daabici karo iyadoo loo eegayo baahiyaha dhabta ah. Agabkeenu waxay leeyihiin iftiin wanaagsan oo iftiin leh, si fudud loo daabici karo, ma fududa in la dumiyo oo ololku dib u dhaco. Waxay kale oo ay bixin kartaa waxqabad muujinaya iyadoon la siin awood koronto marka lagu jiro xaalad degdeg ah, taas oo cagaaran iyo ilaalinta deegaanka.
Ciddiyaha Wadada Subway
Ciddii Ka Baxida Subway Subway Shuruudaha alaabada calaamadaha daadgureynta dabka (1) Qaado heer caalami ah 3mm heerkiisu sareeyo 304 stain heerka birta birta oo aan badnayn, heerkulka birta sareeya oo heerkul sarreeya iyo sameynta cadaadiska mar keliya. Sawirka dusha sare iyo qoraalka waa la shaabadeeyey oo la daadiyay, oo hadhka waxaa lagu daboolay alaabada kaydinta iftiinka. (2) Alaabada keydinta iftiinka waa inay ahaataa qalab dheer oo walwal leh, oo wali iskii u ifin kara markii iftiinka dusha sare uu baaba'o ama uu yaraado. Is-aragga
Calaamadaha Ka bixida Photoluminescent
Calaamadda Is-Iftiiminta Cabbirka iyo cabirka tixraaca Heerka heerka tixraaca: DIN67510 Qeybta I & IV New York CityBuilding Heerarka Tixraaca RS 6-1 iyo RS 6-1A Washability - ASTM D 4828 Suntaan - SMP 800-C Idaacada - ASTM D 3648 Fidida Fidida ASTM D635 Qalabka cufnaanta iyo waqtiga suuska Qalabka: rinjiga loo yaqaan 'photoluminescent pigment' Gudiga aasaasiga ah: aluminiumka 1mm dhumuc Iftiinka: Iftiiminta 10 daqiiqo kadib: 270Mcd / m2 Iftiimin kadib 60 daqiiqo. : 13Mcd / m2 Waqtiga suuska: 18 ...
Aluminium antislip ku dhalaalaya jaranjarada jaranjarada naqshadeyntayada cusub iyo soosaarka Aluminium antislip strips waxay dhalaali kartaa mugdiga ka dib iftiinka, nabdoonaanta, cajiibka ah waxayna kugu hageysaa inaad meel aamin ah ka hesho xaaladaha degdega ah Qaababka aluminiumka ah ee aluminium salka leh bevel dhinaca for kala guurka fudud . Dusha sare ee qallafsan waxaa lagu galiyaa carbisundum grit strips IYO nal iftiin leh, Bilaa-qabsi iyo dhalaal mugdi ah Waxaa lagu rakibay gudaha ama banaanka dhismayaasha mar alla markii loo eego ...
Jaranjarada jaranjarada marada ubax leh
Jaranjarada jaranjarada marada iftiinka leh ee wax lagu sawiro Waxay bixin kartaa qurxin aad u wanaagsan jaranjarada, ka caawinaysa dadka lugeynaya, waxay ilaalin kartaa waayeelka, kuwa tabarta daran, kuwa buka iyo kuwa yar yar; waxay aad ugu habboon tahay waddooyinka isbitaalka iyo jaranjarada. Waxay qurxin kartaa jaranjarooyinka, u ciyaar qurux badan oo wax ku ool ah Waxay ku habboon tahay hos ...
Calaamadaha ifa-ifka ah iyo astaamaha laamiga ayaa si cad u iftiimaya mugdiga mugdiga waxayna iftiiminayaan qulqulka qaxitaanka marka dariiqa jidku mugdi yahay ama mugdi galo. Waxyaabaha nidaamka ayaa dhaqaajiya oo toos u ifiya marka nalalka ay baxaan oo ay ka shaqeynayaan si bilaash ah wax kasta oo bini-aadamka, farsamooyinka ama korantada ah xitaa haddii dhammaan ilaha korontada iyo batteriga ay guuldarreystaan.
Gawaarida qalinleyda lugaha leyskaga soo fidiyey
Dharka 'skid-skid-dheer' ee daba-dheer ayaa si gaar ah loogu talagalay oo loo sameeyay. Sheyga kaliya ma ciyaarayo ka hortagga skid iyo shaqada qurxinta ee caadiga ah, laakiin wuxuu sidoo kale tilmaamayaa habka loogu noolaado xaalad degdeg ah. Habka waxsoosaarku waa mid horumarsan, ilaalinta deegaanka, dab-damiska iyo antiiskid, oo dusha sare ee rinjiga waa mid waara oo kama dhicin. La kulan shuruudaha tayada ee la xiriira.
Calaamadaha lumine-ka ayaa iftiiminaya dariiqa nabdoonaanta
Xilliga dabka, qiiqa ama xiisadda mugdiga, jawiga ugu caansan ayaa noqda
jahwareer iyo khiyaano inay ka cararaan dadka deggan. Hadafka ugu muhiimsan inta lagu jiro xaalad deg deg ah waa in dadka dagganaha ah looga wareejiyo khatarta nabadgelyada hab habaysan. Bixinta dariiq cad oo muuqata oo laga baxo waa mid muhiim u ah ka fogaanshaha argagaxa iyo kahortagga dhibaatooyinka.
Calaamadda daadashada xayndaabka dusha sare / jihada luminta xargaha garka sare ee loogu talagalay baxsiga degdegga ah
Xalaasha dhoobada nalka leh waa badeecad nal iftiin leh oo loo isticmaali karo aqoonsiga amniga iyo qurxinta dhismaha. Codsiga aagag kaladuwan waxay noqon karaan derbiga, sagxadda, jaranjarooyinka iyo shaqo farshaxan oo ku taal maktabadda. Qaar badan oo ka mid ah dhoobadayada iftiin ee iftiinka leh ayaa sidoo kale ku habboon dhismaha oo isku daray hab-socodkii caadiga ahaa ee shaqada iyo tikniyoolajiyadda casriga. Waxay soo bandhigaan saameynta iftiinka waarta, antiseptik, waarta, iyo xasilloonida kiimikada. Ka dib nuugista waxoogaa iftiin muuqda sida iftiinka qorraxda tooska ah illaa 30 daqiiqo, oo si iskiis ah u shid muddo 8 saacadood ~ 12hours. badeecaduhu maahan oo keliya ujeeddada qurxinta laakiin waa tixgelinta amniga sidoo kale.
1, Taleex bir dhalaalaysa oo keliya
2, Basso-relievo oo leh sawir dhalaalaya oo isku dhafan
3, Taargooyinka isku-dhafka ah ee dhoobada dhoobada ah
4, Ka bax calaamada darbiga ama sagxada la dulsaaray
Astaamaha iyo Adeegsiga Sawirrada Xargaha Sawirrada Luminescent Ceramics Tiles
1） Sawirrada dhoobada iftiinka masawirka leh Tiles waxaa laga soo saaray iyadoo lagu daro midab sawir leh lumineedka sawir-qaadista ee dhoobada guud iyo quraaradda. Marka la barbardhigo dhoobada caadiga ah iyo quraaradda, alaabada ayaa dhalaali kara mugdiga kadib markay nuugaan nalalka la arki karo, kuwaas oo ka dhiga dhoobada iyo isticmaalka muraayadaha si balaadhan.
2) Maqaarka sawirka leysku qurxiyo wuxuu nuugi karaa nalal kala duwan oo muuqda ilaa uu ka buuxsamo, ka dib wuxuu iftiinka karaa mugdiga si joogto ah, dib u isticmaal aan xadidneyn oo leh waqti dheer kadib, iftiin aad u sarreeya, oo toban jeer dhalaalaya sheyga luminescent-ka ee dhaqanka. Maaddadu waa ka madax bannaan shucaac, maahmaah aan waxyeelo lahayn oo aan dhib lahayn.
3) Nalalka iftiinka degdegga ah ee hooseeya wuxuu hagi karaa dadka inay u qaxaan si habsami leh xaaladdu ayna yareyn karaan jahwareerka aan ahayn badbaadinta tamarta.
4) Codsashada dhoobada sawirrada guryaha ee guryaha iyo dhismayaasha dadweynaha ma aha oo kaliya qurxin iyo qurxinta guryaha iyo deegaanka shaqada, laakiin sidoo kale waxay u keeni kartaa deggeneyaal badan deggeneyaasha iyadoo mugdikiisu mugdi yahay.
5) Mashiinnada dhoobada iftiinka leh ayaa sii deyn kara hirarka iftiinka dhererka oo cayiman, kaas oo xaddidi kara noocyo yaryar oo-engeeg iyo cudurro. Sifeyntaani waxay la jaanqaadeysaa fikradaha nololeed ee moodada iyo caafimaadka leh ee loogu talagalay dadka casriga ah ayagoo adeegsanaya badeecada jikada iyo qolka qubayska.
6) Xaraashka sawir qaade ee sawir qaaduhu waa xaqiiq-soo-saaris, iska caabin goos goos ah, dib u gurasho dab ah, iska caabin gabow ah oo ka madax bannaan shucaaca marka loo barbar dhigo agabyada kale ee dabiiciga ah, taas oo si ballaaran looga isticmaalo guryaha guryaha iyo dhismayaasha dadweynaha.
Sifeynta ugu weyn
Magac Laambada Iftiinka Luminous aan la sawirin
Nooca derbiga ama sagxadda qurxinta xilliga glwo bilaa sawir la'aan ah
Cabbirka caanka ah 15x25, 30x30, 15x30,45x20cm iwm. Max size60. (Cutubka cm)
Midab dhalaalaya Midab keliya ama Isku qas midab
Maalinta midabka maalin cad oo leh hurdi yar
Midab dhalaalaya oo jira oo leh Jaale-cagaar ama buluug-cagaaran ama buluug-buluug ah
Dhumucda sibidhka 10mm ~ 13cm
Dhumucda lakabka dhalaalaya 2mm - 3mm
Iftiinka sida uu qabo DIN67510 Qeybta 1
Baakadaha: Sanduuqa xumbo leh polystyrene iyo boorar
Shamiil laambado leh oo leh sawir waxaa loogu talagalay macaamiisheenna, waxaa loo sameeyay qurxinta gidaarka, qurxinta dabaqa ama alwaax qaas ah ama qurxinta miiska habeenkii iwm, gaar ahaan Waxaan u tilmaami karnaa wax soo saarka iyadoo loo eegayo dhaqanka kala duwan ee qaranka.
Xiddigta Iftiiminta Nalalka Iftiiminta
Noocyada Calaamadaha Iftiiminta ee Nalalka & Tafaasiisha: 1, iftiinka mugdiga in ka badan 6 saacadood, waxay noqon kartaa hage si ay u muujiyaan meesha aaminka ah kadib markay korantada elektroolka kedis ah dansan tahay. 2, Si loo ilaaliyo cidhifyada talaabooyinka iyo gacan qaadyada 3, coudl waxaa lagu hagaajiyaa biraha, xoogga iyo istareebka marka la isticmaalo dhejin kaliya. 4, daweynta dusha sare iyo midabbo kaladuwan oo loo heli karo doorashadaada: dusha sare ee fadhida iyo dabacsan iyo dusha sare ee boogta-ciidda leh dusha ciid 5.5, farqiga dhererka Dhegeysiga iyo sida ku xusan jiidashada macaamilka ...